Home Wararka Ciidamada Dowlada oo xoog ku galay, albaabadana u xiray Masajid Al-Qadar ee...
Ciidamada Dowlada oo xoog ku galay, albaabadana u xiray Masajid Al-Qadar ee Muqdisho
Si ay sheegayaan ilo lagu kalsoon yahay ciidamo Dowlada ayaa albabada u xireen masajid ku yaala degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Ciidanka oo ku hubaysnaa hub culus ayaa si xog ah ku galay Masaajidka iyada oo uu masjidku xiligaa ay ka socotay cibaado Alle.
Dad goobjoogyal ayaa warbaahunta madaxa banaan u sheegay in ciidamada dowlada ay shalay kusoo dateen Suuqa Bakaaraha, kadibna gudaha u galay masajidka Al-Qadar oo hore la orin jiray Masajidka Sheekh Axmed Sufi.
Ma jirto sabab ay sheegeen ciidanka Farmaajo oo keentay in masjid cibaado ka socoto xoog lagu galo xili ay tahay Ramadaan.
Previous articleQaramada Midoobay oo sheegtay in abaaraho saameeyeen illaa 6 Million oo Ruux
Next article‘Parallel’ elections emerge in Somalia
[Deg Deg] Farmaajo oo sheegay in uu hakiyay shaqada RW Rooble